नक्कली सुत्केरी, सक्कली शिशु चोर, शिशु चोर्नका लागि पाँच रात प्रसुति कक्षमा, अस्पताललाई बेखबर – Nayadhar
नक्कली सुत्केरी, सक्कली शिशु चोर, शिशु चोर्नका लागि पाँच रात प्रसुति कक्षमा, अस्पताललाई बेखबर
आइतबार, आषाढ २९, २०७६ | २२:१८:५२ |
पाल्पा । पाल्पाको लुम्विनी मेडिकल कलेजबाट चोरिएको नवजात शिशुलाई आफन्तलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । शिशु चोरेर फरार रहेकी महिलालाई स्याङजा जिल्लाको कालीगण्डकी गाउपालिका–७, मिर्मीस्थित विद्युत् प्राविधिकरणको आवास गृहबाट नियन्त्रण लिएको थियो । शिशु सहित महिलालाई प्राविधिकरण कार्यालयमा पाल्पा र स्याङ्जा जिल्लाको प्रहरीका सहयोगमा नियन्त्रणमा ल्याउन सफल भएको हो । तानसेन नगरपालिका–९ डाडाडुमकी जमुना रानाको नवजात शिशु चोरिएको हो । शिशु चोरी गर्ने विद्युत् प्राविधिकरणको ज्यालादारी कर्मचारी हो ।
स्याङजा जिल्ला गल्याङ–५, मोहनडाडाकी ३६ वर्षीय विमकला पाण्डेय अस्पतालबाट शिशु चोरेर फरार भइकी थिइन । नाटकीय रुपमा आफु सुत्केरी बनेर टाउ बाधेर, जुवनाको झोल समेत पकाएर खाएको भेटिएको थियो । जमुनाको आमाले छोरीलाई ज्वानोको झोल भान्साघरमा लिन जादा पाण्डेयले शिशु चोरेर फरार रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका प्रमुख दिपेन्द्र जिसीले बताए ।
चोरी गर्ने महिलामाथि कारबाही :
शिशु चोरी गरी फरार गरेकी महिलालाई प्रहरीले अपहरण तथा बन्दी बनाएको आरोपमा मुद्दा चलाएको छ । पाण्डेयले पाल्पाको लुम्विनी मेडिकल कलेजबाट शिशु चोरिएको आरोपमा मुद्दा छ । अपहरण तथा बन्दी बनाउनेलाई १० वर्षको कैदको व्यवस्था कानुनमा उल्लेख गरेको छ ।
अस्पतालको फितलो व्यवस्थापनः
लुम्विनी मेडिकल कलेज व्यवस्थापन पक्षको कमजोरी कारण शिशु चोरी भएको हो । शिशु चोरेर अस्पताल बाहिर निस्किदा समेत अस्पताल प्रशासन बेखर हुन अस्पतालको कमजोरी रहेको पाइन्छ । अस्पताल र प्रसुति कक्षबाट महिला चोरी हुन र चौकीदार स्वास्थ्यकर्मीको पूर्ण बेवास्ताका कारण शिशु चोरिएको हो ? वा अस्पतालका कर्मचारीकै मिलोमोतोमा शिशु चोरी भएको हो ? भन्न जनमानसमा चर्चा पाएको छ । पाँच दिनसम्म विरामीका रुपमा सुत्केरी वाडमा बस्दा अस्पताल प्रशासनलाई थाहा किन भएन ? अस्पताल प्रशासनको पूर्ण कमजोरी हो की ? प्रश्न अस्पताललाई छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरीलाई सास्ती :
जिल्ला प्रहरी कार्यालय शिशु चोरीका घटनामा पटक पटक पत्रकार सम्मेलन स्थगत गर्न बाध्य भएको रहस्य बाहिर आएको छ । शनिबार दिउसो २ बजे गर्ने भनेको पत्रकार सम्मेलन स्थगित गरयो । आइतबार विहान ९ बजे गर्ने भनेर सारयो । तर आइतबार पनि ९ बजेको हाराहारीमा पत्रकार सम्मेलन हुन सकेन । अनन्त स्थगित गरिएको पत्रकार सम्मेलन दिउसो १ बजे पत्रकार सम्मेलन गर्ने तयारीमा पत्रकार सम्मेलन सारियो । के प्रहरी लुम्विनी मेडिकल कलेज प्रभाषसँग डराएको त होइन ? प्रश्न यसरी पनि प्रहरी सामु आए । वा पत्रकारको आग्रहमा पत्रकार सम्मेलन सारिएको आरोप छ । तर, पत्रकार महासघ, पाल्पा शाखा, वा अन्य पत्रकार निकटका संस्थाको औपचारिक आग्रहमा लिखित पत्र प्रहरीसँग छैन । कसले चलाउन प्रहरी प्रशासन ?
गल्ती ढाक्न रोजगार :
लुम्विनी मेडिकल कलेज व्यवस्थापन पक्षको कमजोरी पक्षलाई लुकाउन पीडितका आफन्तलाई रोजगारी प्रदान गर्ने टुङ्गोमा पुगेको छ । नवजात शिशुका बाबुलाई अस्पतालले रोजगारी प्रदान गर्ने भएको हो । शिशुलाई आजीवन स्वास्थ्य उपचारमा निःशुल्क गर्ने घोषण अस्पतालको छ । अस्पताल र पीडीत पक्ष बीच शुनिबार सम्झौता भइसकेको छ ।